Agum Akwuwo – Igbo Services
Onye isi ala Buhari na-arịọ ndị nkuzi mahadum na-arụ ọrụ oku.
ASUU adọtiala abuba-ọrụ ọnwa atọ
Ụzọ ị ga-eji zụọ ụmụ gị na-abụghị sọ ịpịa ụtalị.
ATUMATUOKWU (FIGURES OF SPEECH).
Afrika Ahuike Azum Ahia Egwuriegwu Ihe Emereme Mba Uwa Naijiria
Anyị ga-akparịrị ihe ndị na-ekewa anyị – osote Onye isi ala.
Chigo	 Apr 15, 2022 0
Onye osote onye isi ala Naijiria, Prof. Yemi Osinbajo kwuru na Thursday na ndị Naijiria kwesịrị inwe mkparịta ụka n'ezoghị ọnụ banyere ihe ndị na-akpata nkewa n'etiti ụmụ amaala nke mba ahụ.O kwuru nke a na Lagos na ngosi na mmalite…
FCTA, agwala ụlọ akwụkwọ ka ha gaa n’ihu na-agbaso usoro nnabata ya.
FCTA, agwala ụlọ akwụkwọ ọha na eze nọ n'isi obodo mba ahụ ka ha gaa n'ihu na-agbaso usoro nnabata ya. Ndị nchịkwa ahụ nyere nkọwa ahụ n'oge ngosi nke 15th Batch Accreditation Certificates n'ụlọ akwụkwọ ọha na nke onwe na FCT. N'ikwu…
UNICEF kpọrọ oku maka nchekwa ijido ụmụ agbọghọ n’ụlọ akwụkwọ .
UNICEF kpọrọ oku maka nchekwa ijido ụmụ agbọghọ n'ụlọ akwụkwọ site n'aka Òtù Na-ahụ Maka Ụmụaka nke Mba Ndị Dị n'Otu, UNICEF akpọọla gọọmenti Naijiria ka ha mee ka ụlọ akwụkwọ dị mma maka nwatakịrị ọ bụla, karịsịa maka ụmụ agbọghọ, iji mee…
Prezidenti Buhari enyela iwu ka eguzobe federal polytechnics atọ ọhụrụ
CHIDI IGWE	 Apr 13, 2022 0
Prezidenti Muhammadu Buhari enyela iwu ka eguzobe ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnics atọ ọhụrụ n’ala anyi. Ozi sitere n’aka onye Direkto n’ahu mgbasa ozi na nmekorita ọhaneze nke ụlọ ọrụ Federal Ministry of Education bụ, Ben Bem Goong,…
UTME JAMB Adila njikere imalite ule UTME 2022
CHIDI IGWE	 Apr 12, 2022 0
Ụlọ ọrụ Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB n’aha ichafu ekwuputala njikere ha imalite ule nke 2022 Unified Tertiary Matriculation Examinations UTME,n’ala anyi gba gburugburu. Aga amalite ule a n’abali isii ruo…
Onye isi ala Buhari na-anata ndị isi ICAN.
Chigo	 Apr 8, 2022 0
Onye isi ala Muhammadu Buhari na-ekwu na ndị ọkachamara na ngalaba dị iche iche, karịsịa ndekọ ego, na-enye ike na usoro maka akụ na ụba na-eme nke ọma. O mesiri ya obi ike na nchịkwa ya ga-aga n'ihu na-etinye ndị ọkachamara aka iji…
A ga-eguzobe mahadum iri na abụọ n’ofe Naịjirịa.
Chigo	 Apr 7, 2022 0
Federal Executive Council akwadola ka e guzobe mahadum iri na abụọ n'ofe Naịjirịa. Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi na omenaala, Lai Mohammed kwupụtara nke a nye ndị nta akụkọ n'ụlọomeiwu steeti na ngwụcha ọgbakọ kansụl nke onyeisiala…
Ọ BỤ GịNị MERE ỌTỤTỤ NDļ JI EJE MBA UKARINE ļGỤ AKWỤKWỌ.
Chigo	 Mar 10, 2022 0
Ọtụtụ ndị na-abanye Ukraine ịgụ akwụkwọ na-eme ya maka atụmatụ isi n'ụzọ ahụ banye ọrụ n'Europe dịka ịgụ akwụkwọ n'Ukraine adighị ọnụ etu ọ dị na mba ofesi ndị ọzọ. Ihe ọzọ bụkwa na inwete akwụkwọ njem na nke ịbụ onye mba Ukraine dị…